यी हुन् ह्याकर्सले ह्याक गर्दा प्रयोग गर्ने तरिकाहरू!
नेपाली पब्लिक मंगलबार, वैशाख २३, २०७७ १५:०९
काठमाडाैं– ह्याकिङ्ग के हो त सबैलाइ थाह नै छ होला, तर तपाइँहरुलाई थाह छ धेरै जसो ह्याकरहरुले कुन तरिका प्रयोग गरेर तपाइँहरुको सम्पुर्ण जानकारी ह्याक गर्छन्? साधारण रुपमा ह्याकिङ्ग भनेको तपाइँको विवरण वा डिटेल्स् चोर्नु बुझिन्छ। जसमा तपाईँको बैंक विवरण, पासवर्ड, पिन नम्बरहरु पर्छ्न्। यसका लागि ह्यकर्सले कुन कुन तरिका प्रयोग गर्छन् त? यो बारे हामीले केही तरिकाहरुको चर्चा गरेका छौँ।
१. ब्रूट फोर्स अट्याक (Brute force attack):
यो अट्याक ह्याकरहरु माझ धेरै नै प्रचलित र प्रख्यात छ। यसमा लगातार वर्णमाला र संख्यात्मक १२३४..को संयोजनद्धारा तपार्ईँको विवरण निकाल्ने कोसिस गर्दछन्। यस्तोमा तपाईंको पासवर्ड सामन्य रहेको छ भने ह्याकरहरुले यो अट्याक प्रयोग गरेर सजिलै तपाइँको विवरण निकालि ह्याक गर्न सक्छन्।
२. फिशिंग अट्याक (Phishing attack):
यो अट्याक पनि सबै जसोे ह्याकरहरुले प्रयोग गर्ने गर्छन्। यसमा ह्याकरहरुले फेक वेबसाइट बनाउछन् जुन सक्कलि वेबसाइटसँग हु–बहु मिल्ने गर्छ। त्यस पश्चात त्यस्को लिंक ह्यकको शिकार माझ मेल वा मेसेजमा पठाउने गर्छन्। यदि त्यो लिंकबाट खुलेको साईटमा शिकार भएकाले जे जति विवरण हाल्छन्, त्यो सब ह्याकर्स् सामु पुग्ने गर्छ र सजिलै ह्याक गर्न सक्छन्।
३. कि लगर अट्याकस (keylogger attack):
यो अट्याकमा ह्याकर्स्ले तपाइँको डिभाइसहरुकाे सफ्टवेयरमा, भाइरस र मालवेयरहरु इन्स्टल गर्छन् र त्यस पछि तपाईँले गर्ने हरेक क्रियाकलापकाे जाकारीहरु लिने गर्छन्। यो तरिका हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुबै किसिममा हुन्छ।
४. डिक्शनरी अट्याक (Dictionary Attack):
यो अट्याक ब्रूट फोर्स अट्याक जस्तै नै हुन्छ। यदि यसमा तपाइको पासवर्डहरु डिक्शनरीमा भएका शब्दहरु छन् भने यो अट्याकद्वारा ह्याकरहरुले सजिलै ह्याक गर्न सक्छन्।
५. वाटरहोल अट्याक (Waterhole attack):
यो अट्याकमा ह्याकरहरुले शिकार भएकाहरुको रुटिनलाई चेक गर्ने गर्छन्। कुन बेला कहाँ जान्छन्? के के चलाउछन्? जस्ता सामन्यतया दिन चर्यालाई बुझ्दछन्। त्यसपछि त्यो क्षेत्रमा फेक वाईफाई सिर्जना गर्छ्न। अब फ्रि वाईफाई त कसले कनेक्ट नगर्ला र? त्यसपछिको गरिएका सबै हर्कतको जानकारीहरु ह्याकरहरुले लिने गर्छन्। यसरी यो अट्याकद्वारा ह्याकरहरुले सजिलै ह्याक गर्न गर्दछन्।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, वैशाख २३, २०७७ १५:०९